‘कर्णाली आऊ डाक्टर बनेर जाऊ’ — Breaking News, Headlines & Multimedia
नरेश भण्डारीसाउन १३, २०७८काठमाडौं
मेरै नेतृत्वमा प्रतिष्ठान स्थापना पहल समिति बन्यो । सम्बद्ध पक्षको अनुमति तथा परामर्श पश्चात अन्ततः व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरें ! एक जना डाक्टर नबस्ने कर्णालीमा विश्वविद्यालयस्तरको संरचनाको प्रयत्न हुनुलाई थुप्रैले ठट्टा ठाने । प्रतिष्ठान स्थापना नभएमा आत्मदाह गरिदिने घोषणा गरियो । सस्तो लोकप्रियता संज्ञा दिइयो । बकबास भनेर खिल्ली उडाइयो । तर उत्साहको दियोमा पानी खन्याउने मात्र नभई तेल थप्ने पनि भेटिए ।
सेतो हिउँमा सेतै अप्रोनधारी डाक्टरहरू उत्पादन गर्ने सपना सार्थक हुँदैछ ! आगामी दिनमा पनि प्रतिष्ठानलाई अब्बल बनाउन सम्बद्ध पक्षको योगदान रहिरहेमा सगौरव भन्न सकिनेछ, ‘कर्णाली आऊ डाक्टर बनेर जाऊ, कर्णाली आऊ स्वस्थ बनेर जाऊ !’
‘हात नसमाऊ, खुट्टा छोऊ !’
केसीको राजनीतिक यात्राः शिक्षकदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म